अन्योलको भूमरीमा बुढीगण्डकी आयोजना,बाबुराम भट्टराईले उठाए यस्तो प्रश्न | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
अन्योलको भूमरीमा बुढीगण्डकी आयोजना,बाबुराम भट्टराईले उठाए यस्तो प्रश्न
काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोलाए ।
विगतमा एउटै पार्टीमा हुँदा समेत राम्रो सम्बन्ध नभएका बाबुराम मन्त्रीको आग्रहलाई अस्वीकार गर्न सकेनन् र छलफललमा गए । छलफलको विषय थियो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो नलागेका कारण आयोजान प्रभावित समस्यामा परेका छन् ।
बाबुरामले मन्त्री पुनलाई सोधे – बुढीगण्डकीको काम किन रोकिएको हो ? सधै यही अवस्थामा राखेर आयोजना बन्ला त ? उनको प्रश्न थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा तयार गर्दै आयोजना प्रभावितलाई तत्काल मुआब्जा वितरण गर्ने वातावरण बनाउन उनीलगायत सम्वद्ध व्यक्तिले मन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।
लामो समयदेखि आयोजनाको चर्चा मात्रै हुने काम अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रमा निराशा फैलिएको भन्दै स्पष्ट निर्णय गर्न सरकार भएकाले मन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ । आयोजनाको निर्माण ढाँचा अगाडि बढ्न नसकेपछि मुआब्जा वितरणको काम भने जारी छ । तर सोचेजति तीव्ररुपमा मुआब्जा वितरणको काम शुरु हुन नसक्दा प्रभावितले आयोजना बन्ने हो कि होइन भन्नेमा आशंका पैदा भएको छ ।
मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको ढाँचाका बारेमा केही समयभित्रै आवश्यक निर्णय गरिने बताएका थिए । उनले मुआब्जा वितरणको कामलाई गति दिइने र पैसाको कुनै अभाव नभएको भन्दै चालू आवको अन्त्यसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा दिइसक्ने गरी सरकारको संयन्त्र परिचालन गरिने बताएका थिए ।
यस्तै पुनःस्थापना तथा पुनर्वासको विषयमा आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको र केही समयभित्र आवश्यक निर्णय गरिने उल्लेख गरेका थिए । बढी विद्युत् माग हुने क्षेत्रको आयोजना भएको र लामो समयदेखि चर्चामा रहेका कारण आयोजना उपयुक्त ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी सरकारको तयारी रहेको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजन गरेको छ । तर हालसम्म ४ अर्बजति मात्रै वितरण गरिएको छ । धादिङ र गोरखाका प्रभावितलाई हालसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई शीघ्रातीशीघ्र आयोजना निर्माणको प्राक्रिया अगाडि बढाउन छलफलमा सहभागीले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजना प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनर्वासको कार्ययोजना बनाउँदा सकेसम्म आयोजनाकै आसपासमा बस्न चाहने नागरिकलाई बढी सुविधा दिने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोजनाका विषयमा उठेका आशङ्कालाई दूर गर्दै मन्त्रालयले शीघ्र उपयुक्त निर्णय गर्न, मुआब्जा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यानकर्षण गराए ।
छलफलमा धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा वितरणमा परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कर्मचारीको अभाव देखिएको, नापी र मालपोत कार्यालयमा कम कर्मचारी हुँदा आयोजनालाई नै भनेर काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड थियो ।
सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आवश्यक संवाद गरी उपयुक्त ढाँचा तय गर्ने जिम्मा यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण ढाँचाका बारेमा छलफल जारी रहेको भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन ।
सडक पुगे पनि हवाई यात्रामा उस्तै चाप , सडक सञ्जालमा पुल निर्माण नभएकाले सास्ती
अनतत् : कैलाली बम विष्फोटमा आफ्नो संलग्नता रहेको विप्लवद्धारा स्वीकार , निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति